Vondron-tsarimihetsik'i Solid Solid Lifebuoy - Mpanjifa mpamokatra solika sy mpamatsy solika - Zhenhua Electrical
Home > Products > Lifejacket Light And Lifebuoy fahazavana > Solid Lifebuoy
Ny famonoan-tena mafy dia fitaovana mamonjy aina mamonjy aina, matetika vita avy amin'ny cork, foam na fitaovana hafa maivana ary misy angovo kely manokana, ary ny latabatra ivelany dia rakotra lamba sy plastika ary ny toy izany.
Ny famonoan-tena mafy dia fitaovana mamonjy aina mamonjy aina, matetika vita avy amin'ny cork, foam na fitaovana hafa maivana ary misy angovo kely manokana, ary ny latabatra ivelany dia rakotra lamba sy plastika ary ny toy izany. Ny famonoan-dàlana amin'ny fanaovana fomban-tsakafo dia azo atao koa amin'ny fingotra ary feno rivotra, fantatra koa amin'ny tarika rubber.
Ampiasaina mba hamotsorana ny famantarana ny setroka rehefa voavono ho fanampiana ilay sambo. Ny polyethylene dia mpamorona ravina manana polyethylene avo lenta toy ny faty
Ny endrika Lifebuoy: Ny lokon'ny rajako dia tokony mena-mena ary tsy misy loko hafa. Tokony ho afaka amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny kitroka ny rindrin'ny mpamonjy voina. Amin'ny toerana efatra mitovy habe amin'ny alàlan'ny vakimparitra, dia tokony hikorontana manodidina ny 50 milimetatra ny kasety misy rindrina.
Ny refy: Ny diam-bolana ivelan'ny mpamonjy voina dia tokony mihoatra ny 800mm, ary ny diamondra anatiny dia tsy tokony ho 400mm.
Ny sisim-borona ivelan'ny mpamonjy voina dia ahafahana manamboatra telegrama misy lanezy manana metimety tsy latsaka 9.5 mm ary latsaky ny avo efatra heny ny diam-bolana ivelan'ny mpamonjy voina. Tokony hofehezina amin'ny telovolana efatra ny telegrama manodidina ny peratra ary hamorona lamosina efatra mitovy halava.
Weight: Ny mpamono olona dia tokony handanja mihoatra ny 2.5 kg. Ny famonoana olona iray miaraka amin'ny mari-pamantarana fimenomenana tampoka sy ny fitaovana haingam-pandeha mifamatotra amin'ny jiron'ny hazandrano manjelatra dia mihoatra ny 4 kilao.
Votoatin'ny fitaovana: Ny fitaovana enti-mamelona sy ny fitaovam-pamokarana anatiny ao anaty valizy dia tokony ho foibem-paritra.
Performance: Ny mpamonjy voina dia tokony ho mafy orina amin'ny elanelana avo lenta sy ambany, tsy misy fampihenana, famoretana, fiparitahana, ary fahavitrihana.
Ny famonoan-doha dia tokony hidina avy amin'ny habaka voafaritra ary tokony ho tapaka na tapaka.
Ny ranon'aina dia tokony ho solon'ny solika, tsy misy fifehezana, famoretana, fiparitahana, ary famaranana.
Ny mpamonjy voina dia tokony ho mafy orana ary tsy tokony hodorana na tsy ho reraka aorian'ny hafanana.
Ny mpamonjy aina dia tokony ho afaka hanohana 14.5kg vy amin'ny rano madio mandritra ny 24 ora. Raha ny fanavotana maimaim-poana dia tokony hihoatra ny 90 kg mandritra ny 30 min ny rivo-doza tsy misy fihenam-bidy sy fampihenana maharitra. Ho an'ny mpamono olona miaraka amina fantson-tsetroka tampoka sy fahazavana mahaleotena mifamatotra amin'ny fitaovana fitifirana, dia tokony hipoitra ny fitaovana rehefa afahana.
Fanamafisana: Ny laharam-pamokarana dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fitaovana, anisan'izany ny famolavolan-dàlana miafina, fampirimana ny hazavana mitsingevana na ny setroka sigara
Hot Tags: Solid Lifebuoy, China, manerantany, mozika, ao amin'ny tahiry, Customized, ambany vidiny, mividy fihenam-bidy, Mponina, vidin-tsolika, mora, avo lenta, orinasa, Made in China, vidin'ny